‘संविधानको विनाशको बीजारोपण बन्द गरौँ, राष्ट्रिय सहमतिमा मात्रै चुनाव गरौँ’
बडो असमञ्जसमा म बोल्न गइरहेको छु । बोलूँ कठिन, नबोलूँ झन् कठिनको अवस्था छ । विगत महिनाहरूमा के–कस्ता घटना भए । ती घटनाले यस संसदलाई कसरी प्रभावित बनायो । संसद पुनर्स्थापनापछि संसदभित्र र संसदबाहिर के–कस्ता कठिनाइ आइपरे, त्यस विषयमा हामी विज्ञ छौँ । व्यवस्था एउटा कुरा हुन्छ, व्यक्ति अर्को कुरा हुन्छ ।
व्यवस्थागत त्रुटिलाई एउटा व्यक्तिले आफ्नो क्षमता र त्यागका साथ परिष्कार र परिमार्जन गर्दै लैजान सक्छ । कुनै पनि मुलुकमा लेखिएको संविधान परिवर्तन नै नभई संशोधन नै नभई चिरञ्जीवी हुन सकेको छैन । अपरिवर्तनीय संविधानको अन्त्य भएको छ, यसको उदाहरण नेपालमा पनि छ । संविधानलाई परिष्कार र परिमार्जन गर्नुपर्ने कुरालाई बिर्सिएर एकैपटक संसद् भंग गर्ने कदम हामीले देख्यौँ ।
अहिले संसद् पुनर्स्थापना भएको छ । पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने संस्थालाई यसका लागि दबाब दिने जनतालाई र संसदको पक्षमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनतालाई धन्यवाद । मैले नै संसदमा बेलायती प्रसंग कोट्याउँदै 'इनफ इज इनफ' भनेको थिएँ । त्यसको चोटिलो जवाफ मलाई प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको थियो । उत्तर दिन उहाँ माहिर हुनुहुन्छ ।
दक्षिण एसियामा मोदीलाई बाहेक सबै नेतालाई उहाँले उत्तरमा पररास्त गर्न सक्नुहुन्छ । यस अवस्थामा अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न- त्यो चुच्चे नक्सा कता हरायो ? त्यसको भ्रूणहत्या भएको हो वा बालहत्या भएको हो ? वा राष्ट्रिय राजनीतिको सानो मोहर मात्र थियो ? वा सतरञ्ज खेलको प्यादा मात्र थियो ?
इनफ इज इनफभन्दा भ्रष्टाचारका कुरा थिए । राज्यशक्तिको अनुपस्थतिको कुरा थियो । एकपछि अर्को बलात्कारका घटना थिए । अहिले आइपुग्दा संसद् विघटन र पुनर्स्थापनापछिका गतिविधिले धेरै गम्भीर कुरा उठाएका छन् । भ्रष्टाचारको विषय मात्रै उठाएर पुग्नेवाला छैन । विकासको गतिको जडताको कुरा उठाएर मात्रै पुग्नेवाला छैन । हामी त राष्ट्रकै नियतीको किनारामा आइपुगेका छौँ ।
२०४७ सालमा हामीले संविधान बनायौँ । संविधान बनाएपछि सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले घोषणा गर्नुभयो, 'यस्तो सुन्दर संविधान विश्वमा कहीँ छैन ।' हामीले पनि पत्यायौँ । हो, हाम्रा विद्वान् नेताले भनेको, संसदीय व्यवस्थाका जानकार नेताले भनेको भन्दै हामीले पत्यायौँ । त्यो संविधानको परिणीति के भयो, हामी सबैलाई थाहा छ । त्यसको उपलब्धि जोगाउन नसक्नुमा हामी सबैको संलग्नता थियो ।
जुन भावनाले चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई पररास्त गरेका थियौँ, त्यही भावअनुसार संसदलाई पूरा कार्यकाल चल्न दिऔँ । सकुनीले पासा फालेजस्तो दोबारा पासा फ्याँकेर संसद् विघटन गर्ने कदममा प्रधानमन्त्री नजानुस् ।
अहिलेको संविधान सुखद स्वागतका साथ पनि बनेको छैन । ठूलो विवाद र विभाजनका बीच संविधान जारी भएको थियो । दिपावली र कालो दिन एकैपटक मनाइएको थियो । यो संविधानसँग दलित असन्तुष्ट थियो । जनजाति घोर विरोधमा थिए भने मधेस त विद्रोहको बाटोमा गइसकेको थियो । यस संविधानलाई हामीले सम्हाल्ने कि नसम्हाल्ने ? यसलाई हामीले मलजल गर्ने कि नगर्ने ? मलजल गर्नुको साटो भर्खर उखलेको बिरुवालाई जरो लागेको छ कि छैन भनेर हेर्ने ?
बिरुवा लगाउनेले बिरुवालाई धैर्यपूर्वक जलमल गर्नुको साटो उखेलेर जरा हेर्ने परिपाटी हामीले विगत महिनामा देख्यौँ । अब जरा हेर्न खोज्नेले र जरा हेर्न नदिनेले नयाँ दायित्व लिनुपर्नेछ । यो संविधानको रक्षा हामी गर्छौं गर्दैनौं । रक्षा गर्दा यही रूपमा गर्छौं वा यथोचित परिमार्जनका साथ गर्छौं ।
त्यो परिमार्जन टालटुले हुन्छ वा सबै पक्षलाई समेट्ने हुन्छ । सबैलाई समेट्ने गरी परिमार्जनको काम एक्लै कसैले पनि गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि एक्लै यो काम सम्भव छैन । प्रतिपक्षी दलले पनि एक्लै गर्न सक्दैन । संविधानको पहिलो परिभाषा के हो भने संविधान मूलत: परिवर्तनको दस्तावेज हो ।
यो सदनबाट म राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति आह्वान गर्न चाहन्छु । अहिले मानौँ, प्रधानमन्त्री सडकमा फ्याकिँएको छ । शेरबहादुर देउवादेखि, महन्थ ठाकुरदेखि, प्रचण्डदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीसम्म त चिरञ्जीवी प्रधानमन्त्री रहेको कुरा आइरहेको छ । प्रश्न सरकारको नेतृत्व कसले गर्छ भन्ने होइन । यो संविधानलाई बचाएर यसलाई टेकेर हामी अघि बढ्ने हो कि होइन वा यसलाई २०४७ सालको संविधानको जस्तै बिजोग गर्ने हो ? अथवा चुच्चे नक्साको जस्तै बिजोग बनाउने हो ?
दोस्रो अब चुनावको कुरा हो । चुनाव लोकतन्त्रको अपरिहार्य कुरा हो । चुनावमा जाऊँ तर कसरी जाने ? यही सरकारको नेतृत्वमा चुनावमा जाने कि ? कुनै व्यक्ति वा शक्तिले बाहिर बसेर कुनै शक्तिले विद्रोह गर्छ कि ? याद राख्नुस्, चुनाव पनि सहमतिमा जाने कुरा हो । सानो समूहले २०४७ सालको संविधान मान्दैनौँ भन्दा त्यसको विनाशको बीजारोपण भएको थियो । यो समय आज पनि आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, आफ्नो अहम्‌भन्दा माथि उठेर काम गर्नुस् । विगतमा तपाईंले प्रतिपक्षी दलको नेतालाई आफ्नो इरादा बताउनुभएको थिएन । सभामुखलाई विश्वासमा लिनुभएको थिएन । यो संकट एक दिनमा आएको होइन । संकट मुख्यत: प्रधानमन्त्रीको कारणले आएको छ । अब अप्ठ्यारो समय आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई छोड मात्रै भनेर पुग्नेवाला छैन, समाधान पनि दिनुपर्नेछ ।
चुनावै गर्ने हो भने पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन तयार होऔँ । जुन भावनाले चुनाव गराउने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई पररास्त गरेका थियौँ, त्यही भावअनुसार संसदलाई पूरा कार्यकाल चल्न दिऔँ । सकुनीले पासा फालेजस्तो दोबारा पासा फ्याँकेर संसद् विघटन गर्ने कदममा प्रधानमन्त्री नजानुस् ।
-प्रतिनिधिसभा बैठकमा साेमबार गिरीले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश
प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत ३०, २०७७, १५:२५:००